जापानबाट फर्केर राजनीतिसँगै कुखुरापालनमा व्यस्त दुई युवा « Rara Pati
जापानबाट फर्केर राजनीतिसँगै कुखुरापालनमा व्यस्त दुई युवा
१६ कार्तिक, काठमाडौं । जापानबाट फर्केर बागलुङका दुई जनाले राजनीतिसँगै कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । राजनीतिलाई धेरैले कमाइ खाने भाँडोजस्तो बनाएको सन्दर्भमा तीव्र बहस हुँदै आएको बेला जापान त्यागेर राजनीतिसँगै कुखुरापालन गरी अण्डा उत्पादनमा दुई जना खटिएका छन् ।
विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय बागलुङका दुई जनाले व्यावसायिक कुखुरा पालन गरिरहेका छन् । ४ वर्ष साउदी अरबमा र ६ वर्ष जापान बसाइपछि नेपाल आएका गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ हरिचौरका ललितबहादुर श्रीस र चार वर्षको जापान बसाइपछि फर्किएका बागलुङ नगरपलिकाका–२ बालमन्दिर रोडका इन्द्र केसीले अण्डा उत्पादनका लागि लेयर्स जातका कुखुरापालन गर्दै आएका छन् । दुवै जनाले हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा (नेकपा)मा सक्रिय राजनीति समेत गर्दै आएका छन् । श्रीस नेकपाको गलकोट नगर कमिटीको अध्यक्ष र केसी नेकपा बागलुङ नगर कमिटीको सचिव छन् । श्रीस र केसी पार्टीको बैठक, भेटघाट तथा जनगुनासो सम्बोधन गर्ने काममा त व्यस्त हुनुहुन्छ नै, त्यससँगै समयको यथोचित व्यवस्थापन गरेर व्यावसायिक कुखुरा पालन पनि उनीरूको मुख्य कर्म हो ।
उमेरले ५१ वर्ष पुगेका श्रीसको जीवनमा अनेकौँ उतारचढाव आए । राजनीति नै जीवन हो भन्दै आएका श्रीस केही समय राजनीतिबाट अलग भएर कहिले साउदी त कहिले जापान भौँतारिए तर विदेशको बसाइ त्यागेर कृषिमा भविष्य देख्न थालेपछि श्रीसले नेपाल फर्केर राजनीतिक जीवनलाई समेत सक्रिय बनाउन थालेका छन् । वि.सं. २०६० मै स्वदेश आएर कृषि पेशा अँगालेका श्रीसले पुनः कुखुरापालनसँगै राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । वि.सं. २०३६ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका श्रीस १० वर्षको विदेश बसाइपछि फेरी राजनीतिसँगै कृषिमा सक्रिय भएका थिए । स्वदेशमै केही गर्ने सोचका साथ जापानजस्तो देशसमेत त्यागरे व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका श्रीस अहिले गलकोटकै सफल कृषकका रूपमा परिचित छन् ।
यस्तै ४० वर्षका केसीले दुई वर्षअघिदेखि बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ कृषिगाउँमा जिम्माल कृषि फार्म सञ्चालनमा लल्याएका छन् । तीनवटा ब्लकमा स्थापना गरिएको उनको फार्ममा हाल दुई हजार ५०० लेयर्स जातका कुखुरा छन् । अहिले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी अण्डा उत्पादन भइरहेको केसीले बताए ।
हरिचौरमा रहेको प्रशस्त जग्गामा सुन फलाउने लक्ष्यका साथ श्रीसले विसं २०६१ देखि सुन्तला खेती, केही समय बाख्रापालन र अहिले अण्डा उत्पादनका लागि लेयर्स जातका कुखुरापालन गर्दै आएका छन् । ‘राजनीतिबाट सामाजिक जीवन चल्दै आए पनि आर्थिक जीवन चलाउन पहिले विदेश र विदेशबाट आएर अहिले कृषि पेशामा लागेको छु’, श्रीसले भने, ‘कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेपछि पुनः राजनीतिमा समेत सक्रिय हुँदै आएको छु ।’
अहिले उनको तरकारी टनेल तथा खुला जग्गामा भिन्डी, टमाटर, लौका र करेलालगायतका तरकारी उत्पादन भएका छन् । श्रीसले १० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ३०० किलोभन्दा बढी उत्पादन दिने सुन्तला, वार्षिक १२ क्विन्टल धुलो उत्पादन गर्दै आएको बेसारखेती र वि.सं. २०७१ देखि श्रीस पोल्ट्रीमार्फत लेयर्स जातका कुखुरापालन गरी अण्डा उत्पादन गर्दै आएका छन् । श्रीसका अनुसार अहिले लगानी र ध्यान कुखुरापालनमै बढी केन्द्रित भएको छ ।
चार हजार कुखुरा पाल्ने क्षमताको श्रीस पोल्ट्री फार्ममा अहिले झण्डै तीन हजार अण्डा दिने कुखुरा छन् । पश्चिम बागलुङलाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कुखुरा पालनमा आएको भन्दै हालसम्म एक करोड ३० लाख लगानी गरिसकेको र नाफाबाट आएको रकमसमेत लगानी गर्दै आएको श्रीसको भनाइ छ ।
उहाँले फार्मबाट मासिक रु चार लाख आम्दानी गरेको बताउँदै सबै खर्च कटाउँदा रु एक लाख बचत गर्न सकिने बताए । आम्दानी राम्रै भए पनि कुखुराको दाना महङ्गो हुँदै गएका कारण नाफा घट्दै गएको बताए । व्यावसायिक उत्पादनमा नजोडिने हो भने राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलमा पर्ने भन्दै कुनै न कुनै अवस्थामा युवाहरू उत्पादनमा जोडिन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । अण्डामा आत्मनिर्भर गराउन धेरै युवा बागलुङमा व्यावसायिक अण्डा उत्पादनमा लागेको भन्दै विदेश जान खोजेका युवालाई समेत स्वदेशमै केही गर्ने गरी उत्प्रेरणा जगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने भएको छ । त्यसका